Tonga teny amin’ny Akamasoa teny Andralanitra, Kaominina Ambohimangakely, Distrika Antananarivo Avaradrano i Papa Fransoa, androany tolakandro, tafiditra tamin’ny fandaharam-potoana amin’ny fitsidihana Apostolika nataony teto Madagasikara.
Nakotrokotroka ny fandraisan’ny ankizy, taizan’ny Akamasoa, azy teny an-toerana. Nanamarika izany hira maredona nanaka-danitra, fijoroana vavolombelona sy vetsovetso arahim-bavaka nataon’ny ankizy aman’arivony maro.
Nilaza i Papa Fransoa, fa tsy lahatra ny fahatrana, ary aza miraviravy tanana manoloana ny voka-dratsy ateraky ny fahatrana. Nanentana ny rehetra ny tenany mba tsy hanaiky ho resin'ny fankam-panahy ka hihevitra fa vita mora tsy ilana ezaka ny fiainana.
Telopolo taona izao ny Akamasoa, toby miorina tamin’ny toerana fanariam-pako onenan’ireo sahirana, ireo voahilikilika teny anivon’ny fiarahamonina, ireo tsy misy mpijery… ka nanorenan’izy ireo fiainana vaovao, eo ambany fitarihana sy fiahian’ny mompera Pedro Opeka, avy amin’ny fikambanana Lazarista.
Tanàna valo no efa voaorin’ny mompera Pedro Opeka hatreto, izay ahitana trano manodidina ny 3 000 eo, misy fianakaviana sahirana 23 000 sy zaza 8 000.